Isibhakabhaka esingapheliyo: umdlalo wokuhlola indawo kunye nokulwa | Ubunlog
Isibhakabhaka esingapheliyo yindawo yokurhweba yendawo ye-2D kunye nomdlalo wokulwa Uphefumlelwe ngothotho lwe-Escape Velocity yakudala. Uqala njengokapteni wesiphekepheke esincinci kwaye unokukhetha ukuba wenze ntoni ukusuka apho. Umdlalo kubandakanya icebo elikhulu kunye nemisebenzi emininzi Abancinci, kodwa unokukhetha ukuba uyafuna ukudlala ngesiqwenga okanye uzibethe njengomrhwebi, umzingeli oyintabalala, okanye iscout.
Isibhakabhaka esingapheliyo simahla, umthombo ovulekileyo kunye neqonga lomnqamlezo (Windows, Mac kunye neLinux). Ixesha elingaphezulu, umdlalo wendalo yonke uya kwanda njengabanikeli bezongeza imisebenzi emitsha, imigca yamabali, iintlobo zasemzini, iindawo zokuhlola, iziphumo zesandi, kunye nomsebenzi wobugcisa.
1 Malunga nesibhakabhaka esingapheliyo
1.1 Ubuncinci beemfuno zokuqhuba kwiLinux
1.2 Iimfuno ezikhuthaziweyo zokubaleka kwiLinux
2 Ungasifaka njani isibhakabhaka esingapheliyo ku-Ubuntu kunye neziphumo?
2.1 Faka kwiphakheji yedebhu
2.2 Ukufakwa kwiFlatHub
2.3 Ukufakwa kwiStam
Malunga nesibhakabhaka esingapheliyo
Unokufumana imali ngokuhambisa abakhweli okanye imithwalo, uhambise ii-convoys, iindawo zokuzingela okanye ukuphanga nokuthimba iinqanawa zotshaba. Unako kwakhona ukulwa imfazwe yamakhaya okanye ungayihoyi iyelenqe kwaye wonwabele ukuphonononga i-galaxy kunye nokuqhushumba iipirate.
Ngethamsanqa kukho amakhulu 'amaqela' ahlukeneyo (izixhobo, iinjinjini, iijenreyitha zamandla, iinkqubo zokupholisa kunye nokunye okuninzi) onokuzithenga ukuphucula inqanawa yakho.
Umgca webali ophambili uthatha iiyure eziyi-8-16 ukuze uwudlale. Umthala uqulethe amakhulu eenkqubo zeenkwenkwezi kunye neeplanethi, kunye neendidi zamanye amazwe ezinobuchwepheshe bazo obukhethekileyo.
Unokukhetha ngaphezulu kweenqanawa ezingamashumi amahlanu kunye nokuphuculwa kwenqanawa kumakhulu aliqela. Inkqubo ivumela nabani na onomhleli wokubhaliweyo kunye nenkqubo yemizobo yokwenza iinqanawa ezintsha, izixhobo okanye imishini kunye nomhleli we-galaxy unokusetyenziselwa ukongeza iinkqubo ezintsha zeenkwenkwezi kunye neeplanethi.
Ngaphandle kwako konke oku, kunokwenzeka ukongeza izongezo kumdlalo onokuzikhuphela kuyo lewebhu ilandelayo.
Ubuncinci beemfuno zokuqhuba kwiLinux
Imemori: 350 MB RAM
Ikhadi lemifanekiso: I-OpenGL 3.0
Ihard disk: I-65 MB yendawo ekhoyo
Iimfuno ezikhuthaziweyo zokubaleka kwiLinux
Imemori: 750 MB RAM
Ikhadi lemifanekiso: I-OpenGL 3.3
Ihard disk: I-170 MB yendawo ekhoyo
Ungasifaka njani isibhakabhaka esingapheliyo ku-Ubuntu kunye neziphumo?
Ukufakela kulo mdlalo kwinkqubo yethu, sinokuyenza ngeendlela ezahlukeneyo ukuze ukhethe oyithandayo.
Faka kwiphakheji yedebhu
Indlela yokuqala esinokuyisebenzisa ukuyifaka ivela kwiphakheji yedebhu. Siza kukhuphela oku ngoncedo lomyalelo wget ngolu hlobo lulandelayo.
Abasebenzisi benkqubo ye-64-bit baya kuqhuba lo myalelo ulandelayo kwisiphelo sendlela:
Ngoku kwabo bangabasebenzisi beenkqubo ezingama-32-bit, baya kwenza ntoni oku kulandelayo:
Nje ukuba iipakeji zikhutshelwe, siya kuzifaka nomphathi wephakheji oyikhethileyo okanye kwisiphelo sendlela ngalo myalelo ulandelayo:
Kwaye sisombulula nakuphi na ukuxhomekeka ngalo myalelo ulandelayo:
Indlela yesibini ekufuneka siyifakile kulo mdlalo kwinkqubo yethu ngoncedo lweephakeji zePlppak. Yiyo loo nto Kuya kufuneka babe nenkxaso yokufaka ezi ntlobo zeephakeji kwinkqubo yabo.
Ufakelo luya kwenziwa ukusuka kwisiphelo sendlela ngokwenza lo mthetho ulandelayo:
Kwaye ukulungele ngayo, ungaqhuba lo mdlalo kwindlela yakho. Kuphela kufuneka bajonge isiqalisi kwimenyu yabo yesicelo.
Kwimeko yokungafumani isiqalisi, ungawuqhuba umdlalo kwisiphelo sendlela ngokwenza lo mthetho ulandelayo:
Okokugqibela, indlela yokugqibela esinokufaka ngayo isibhakabhaka esingapheliyo kwinkqubo yethu kukongeza umdlalo kwiStam.
Lo nto Ekuphela kwento ekufuneka siyenzile kukuba nomthengi weSteam sele efakiwe kwinkqubo yethu.
Singakhangela umdlalo ngaphakathi kumxhasi weSteam ukuwongeza kwiakhawunti yethu okanye uye kuyo ikhonkco elandelayo kwaye uyongeze kwisikhangeli sewebhu.
Ekugqibeleni, Kuya kufuneka sikhuphele kwaye iStam iya kukhathalela ufakelo. Ekupheleni koku, sinokwazisa umdlalo ukuqala ukonwabela oko.
Umendo opheleleyo kwinqaku: ubunlog » Ubuntu » Imidlalo » Isibhakabhaka esingapheliyo-Umdlalo wokulwa nokuKhangela indawo
Uyongeza njani indlela emfutshane (.desktop) kwi-Ubuntu 18.10 Dock